कार्यालय सहयोगीको भरमा फार्मेसी सञ्चालन, निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि पनि नपाएको गुनासो – इन्सेक
कार्यालय सहयोगीको भरमा फार्मेसी सञ्चालन, निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि पनि नपाएको गुनासो
डडेल्धुरा ०७६ असोज ४ गते
परशुराम नगरपालिमा रहेको जोगबुडा अस्पतालमा कार्यालय सहयोगीलाई फार्मेसीमा औषधि विक्री वितरण गर्न लगाइएको छ । जोगबुडा अस्पतालले सञ्चालन गरेको उक्त फार्मेसीमा कार्यालय सहयोगीले औषधि विक्री गरिरहेका छन् ।
दक्ष प्राविधिक कर्मचारीले मात्रै फार्मेसीबाट औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि यहाँका कर्मचारीको लापरवाहीले फार्मेसीमा कार्यालय सहयोगीले औषधि दिनुपरेको हो ।
स्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशिलतालाई नबुझी अस्पतालले कार्यालय सहयोगीको भरमा फार्मेसीबाट औषधि विक्री वितरण गरेर गैर जिम्मेवार चरित्र देखाएको स्थानीय रामदत्त जोशीले आरोप लगाए ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क रूपमा औषधि उपलब्ध गराउने भनेपनि यहाँको अस्पतालमा भने सेवाग्राहीले निःशुल्क रूपमा पाउने औषधि समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
औषधि निःशुल्क रूपमा पाइने आशले सेवाग्राही आउने गरेका र अस्पतालमा पुगेपछि निःशुल्क औषधि नपाएर फार्मेसी वा मेडिकलबाट किन्नुपर्ने भएपछि सेवाग्राही मार्कामा पर्ने गरेको जोशीले बताए ।
अस्पतालले निःशुल्क औषधि दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म निःशुल्क औषधि उपलब्ध नगराएको र अस्पतालकै फार्मेसीबाट किनेको औषधिको विल समेत नदिने गरेको सेवाग्राही आरोप लगाए ।
अस्पतालको फार्मेसीबाट औषधि किन्ने कसैलाई पनि विल नदिने तर फार्मेसीमा राखिएको रजिष्टरमा टिप्ने गरेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अस्पतालले इमरजेन्सी सेवाका लागि ५० रुपियाँको टिकट दिने गरेको भएपनि फार्मेसीले भने औषधि किनेको विल नदिएको सेवाग्राही मोहन भाटले बताए ।
यसरी दैनिक रूपमा औषधिको विल नदिइ विक्री गर्नुले फार्मेसीको आर्थिक अपारदर्शिता झल्किएको समेत सेवाग्राहीको आरोप छ ।
जोगबुडा अस्पतालमा परशुराम नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिकाको रूपाल क्षेत्र लगायतका सेवाग्राही आउने गर्दछन् ।
नेपाल सरकारले जोगबुडा अस्पताललाई १५ शैयाको अनुमति दिएको भएपनि यस अनुरूप सेवा सुविधा प्रदान गर्न नसकेको आम सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ ।
अस्पतालमा कर्मचारी अभावसँगै आवश्यक उपकरण समेत नहुँदा समस्या हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
जोगबुडा अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. करूणा बज्राचार्यले फार्मेसीमा कार्यरत कर्मचारी विदामा गएकाले कर्मचारी अभावका कारण कार्यालय सहयोगीलाई नै सहयोग गर्न भनेको बताए ।
समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सुधारका लागि प्रयास भइरहेको अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. बज्राचार्यले बताए ।